ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: *** ချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား ***
*** ချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား ***
ညချစ်သူ | 9:45 AM | အတွေးရသစာစု
ညချစ်သူ | 9:45 AM |
ဘ၀ရဲ့ နံနက်ခင်းမှာ အာဟာရအဖြစ်သင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို
တောင့်တ နေပါသလား ?ကျွန်တော်ကတော့ သင့်အတွက်
ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်ထားပါတယ် ။ အဲဒီကော်ဖီကို
“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ” သို့မဟုတ် love လို့ နာမည်ပေးထားတယ် ။
အဲဒီကော်ဖီထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်း ၃ မျိုးထည့်ထားတယ် ။
၁ ။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ( Friendship )
၂ ။ ငြိမ်းချမ်းမှု ( Peace )
၃ ။ ကြီးမားခိုင်ခံ့သော ချစ်ခြင်းတရားအရှိန်အ၀ါ ( Passion )
ဘ၀မှာ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတိုင်းကို အဲဒီကော်ဖီခွက်
ကလေးကို နံနက်ခင်းတိုင်း ကျွန်တော်ဖျော်ပေးထားတယ် ။
သင်တို့ရော သင်တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို အဲဒီကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ဖျော်တိုက်ကြည့်ပါ ။
“ ချမ်းမြေ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့အတူ ချစ်ခြင်းတရား ”
တွေကို သင်ပြန်ခံစားရမှာပါ ။
Posted by ညချစ်သူ at 9:45 AM
ရေသန့်မရလို့ ၅ နှစ်အောက် ကလေး ၃ ထောင်ကျော် နှစ်စဉ် သေဆုံးရ - မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေ၊ မလုံလောက်တဲ့အိမ်သာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ မိလ္လာစံနစ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကြောင့် နှစ်စဉ် အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေ...